कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण : आइजिपी खनाललाई समेत कारबाही सिफारिस::Best News Experience from Nepal
आइजिपी खनालसमेतलाई कारबाही गर्न मानवअधिकार आयोगको सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले पक्राउ गरी गोली प्रहारको निर्देशन दिने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशन दिनेलाई कानुनी कारबाही गरी गोली प्रहारमा संलग्न प्रहरीलाई थुनामा राखी मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
‘इन्काउन्टर’ पछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि स्थानीय प्रहरी खटिएको थियो । घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले लालबन्दीका तत्कालीन इन्स्पेक्टर किरणकुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन भनिएको छ । शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा.वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका सचिव भट्टराईले जनाएका छन् । शव परीक्षणमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले देशभरिका अस्पतालमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । छानबिनका क्रममा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी हत्या गरिएको आयोगले जनाएको छ । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताए ।
‘..प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलको एकान्तमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टरसहित तीनजना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्षमातहतमा रहने गरी उनीहरू खटिएका थिए । आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै निर्देशनमा आफूहरू सो ‘इन्काउन्टर’ मा खटिएको बयान दिएका थिए । आयोगले आइजिपीको नाम उल्लेख नगरी निर्देशन दिनेलाई कारबाही गर्न विज्ञप्तिमा भनेको छ । आयोगका एक अधिकारीले आइजिपी र विशेष ब्युरो उच्च अधिकारीको समेत यसमा हात देखिएकाले उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । केही प्रहरीले आफूहरू विशेष ब्युरोका डिआइजीको निर्देशनमा खटिएको बताएका छन् ।
आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेलले यससम्बन्धी नौ पाने आदेश जारी गरेका छन् । सरकारलाई गरेका आठ सिफारिसमध्ये पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।’ इन्काउन्टरमा खटिएका प्रहरीबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी नभएको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
‘चरी’देखि भक्तपुर ‘इन्काउन्टर’ छानबिनमै
चार महिनाअघिको इन्काउन्टर घटनाको आयोगले छानबिन टुंग्याए पनि प्रहरीले पाँच वर्षअघिका इन्काउन्टर घटनाको छानबिन भने अझै टुंग्याउन सकेको छैन । घैँटे भनिने कुमार श्रेष्ठ तथा भक्तपुरमा दुई युवकको प्रहरीको गोलीबाट हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान पनि आयोगमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या घटनामा संलग्न अजय तामाङ र गोपाल तामाङको गत २१ साउन ०७५ मा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो ।
गुन्डागर्दीमा संलग्न आरोपमा दिनेश अधिकारी चरी र कुमार घैँटे प्रहरीको गोलीबाट मारिएको घटनामा आयोगले अहिलेसम्म छानबिन टुंग्याएको छैन । ‘चरी’ को ‘इन्काउन्टर’ भनिए पनि अन्यत्र हत्या गरेर फालिएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको थियो । २१ साउन ०७१ मा चरीको भीमढुंगामा प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो ।
३ भदौ ०७२ मा घैँटे मारिएका थिए । दुवै घटना महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरीबाट भएको थियो । गोलीसम्बन्धी विशेषज्ञ नभेटिएको भन्दै आयोगले यी घटनाको अनुसन्धान रोक्दै आएको छ ।
१ माघ ०७५ मा सप्तरीको रूपनीमा प्रहरी गोलीबाट दीपेन्द्र चौधरी मारिए । प्रहरीले मुठभेड भने पनि घटनास्थलमा त्यस्तो कुनै संकेत भेटिएको थिएन ।
२९ पुस ०७५ मा रुपन्देहीमा प्रहरी गोलीबाट केदार सहनी मारिएका थिए । सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ मा प्रहरीसँग उनको दोहोरो भिडन्त भएको थियो ।
९ फागुन ०७४ मा मनोज पुन र सोमबहादुर आले पनि रुपन्देहीमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए । उनीहरूलाई भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याई गोली हानिएको उनका परिवारले दाबी गरी मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरेका थिए ।
इतिहासकै ‘बोल्ड’ निर्णय गोविन्द शर्मा पौडेल : सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
गैरन्यायिक हत्यामा मुकदर्शक बनेको आरोप खेपिरहेको आयोगले सोमबार निकै ‘बोल्ड’ निर्णय गरेछ नि ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको इतिहासमा यस्तो ‘बोल्ड डिसिजन’ पहिलोपटक भएको हो । हामीले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेरेर नै यो निर्णय गरेका हौँ । प्रहरीले इन्काउन्टरमा नाममा गैरन्यायिक हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । हाम्रो अनुसन्धानमा जे तथ्य देखियो, त्यहीअनुसार निर्णय गरेका हौँ ।
गोली हान्ने प्रहरीलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन भन्नुभएको छ, यस्तोमा के मुद्दा चल्छ ?
फौजदारी मुद्दा भनेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा हो । गोली हानेर हत्या गरेको कसुरमा मुद्दा चल्ने हो । तीनजना प्रहरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका छौँ ।
आदेश दिनेहरूलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न भनिएको छ, त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षक पनि हुन् ?
यो एकदमै ‘भास्ट’ छ । यसमा धेरैजना पर्छन् । गोली हान्ने प्रहरीहरू प्रहरी हेडक्वार्टरबाटै खटिएर गएको भन्ने देखिएको छ । त्यति भएपछि महानिरीक्षक हुन् कि होइन तपाईं नै बुझ्नुस् । हाइलेबलका धेरैजना हुन सक्छन् ।nayapartik
मेष –(चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज...
लक्ष्मन पौडेल बुटवल । मुस्लिम समुदायले इस्लाम धर्मका प्रवद्र्र्धक (दूत) पैगम्बर हजरत...